Yuniversitii Gondarii fi Waldiyaa Keessatti Har’as Hookkarri Ka’e: Barattoota
Yuniversitii Gondor mooraa Maaraakii keessattis har’a haleellaa baarattoota irratti raawwatameen bakka bu’aa barattoota dabalatee ka biroo irratti illee haleellaan raawwatamuu barattoonni ibsanii jiru. Yuniversitii Waldiyaa keessattis irra deebi’uu dhaan hookkarri ka’ee barattoonni hallllaan irratti raawwatamuun ibsameera.
Ministeerri saayinsii fi barnoota sadarkaa ol aanaas har’a ibsa kenneen qaamota barataa fakkaatanii mooraa Yuniversitii seenantu jeeqama uumaa jira. kanneen shakkaman to’annaa jala oolfamaa jiru jedhee jira.
bakka mormii nyaata lagachuu geggeessinee teenyutti dhakaan nutti darbamee haleellaan nu irratti raawwatee jira jechuun himataniiru. Kan barataan Yuniversitii Gonder mooraa Maaraakii reebichi na irratti raawwate jedheen jalqabna.